China siko eshicilelweyo engenanto ipholiyesta ukubaleka t shirt logo mveliso kunye nabenzi | Umbono
Nceda iqela lakho lihlale lipholile kwaye livelele kule ndlela yokusebenza ekumgangatho ophezulu. Ukugqibelela kwamaqela ezemidlalo kunye nemibutho efuna ihempe yokusebenza ekumgangatho ophezulu.
I-100% ye-poly-polyester emikhono emifutshane ebaleka ihempe zenziwe kwilaphu lokugqwesa eligqwesileyo lokusebenza, icala elingafaniyo kunye nokufakwa kwepaneli yemikhono. Eyilwe nekhola yamalaphu kunye nenaliti ephindwe kabini yenaliti.
Nceda iqela lakho lihlale lipholile kwaye livelele kule ndlela yokusebenza ekumgangatho ophezulu. Ukugqibelela kwamaqela ezemidlalo kunye nemibutho efuna ihempe yokusebenza ekumgangatho ophezulu. Akukho namnye ongayi kuyithanda le Tshirt!
Egqithileyo Isikrini esishicilelweyo esicacileyo akukho krwala yamadoda asisiseko ajikeleze intamo yeheather umbala we-tri-blend t shirt